အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်အဖြစ်မှန် - ပျော်ရွှင်မှုကိုဖို့ကိုနှိပ်ပါ?
ကောင်းပြီအဆုံးသတ် - အားလုံးညာဘက်?
ဆိုရင် single အရေအတွက်သည်ယခုအခါယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ တအခြားသူများကိုမြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိစေခြင်းငှါ, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကခါးသီးစိတ်ပျက်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အများကြီးလည်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုသိကျွမ်းရအနည်းငယ်ခက်လုပ်ပေးရိုးရှင်းစွာသတိလစ်လူပျိုသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်။ ပို. ပို. ဆိုရင် single အင်တာနက်ကိုကျော်အဆက်အသွယ်၏ခေတ်သစ်ပုံစံကိုကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လူကြိုက်များကြသည်။
သိသိသာသာပိုပြီးခက်ခဲအစောပိုင်းကသူ၏ "ဒုတိယထက်ဝက်" ၏ search အတွက်သက်သေပြခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌များသောအားဖြင့်အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်, ဒါနည်းလမ်းတွေထဲကအင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်စကားအမျိုးမျိုးယနေ့ရှိပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့အများစု -Dulcinea စဲ - တောင်မှလူကန်လန်, ဒါပေမယ့်ပညာတတ်ရှက်လုလင်ကိုနိုင်အောင်ပင်သည်သူ၏ရှိပါတယ်။
အဆိုပါဖောက်သည် 55 + နှင့်ထိုကဲ့သို့သောထွက်သွားကြဖို့နည်းနည်းအချိန်သို့မဟုတ်ကွံအယူအရာမန်နေဂျာများ, Self-အလုပ်အဖြစ်ရှက်သို့မဟုတ်အလုပ်ရှုပ်လူတို့အဘို့မှာအားလုံးဘယျလိုမှမအဘို့, ကတိပေးအသစ်သောအခွင့်အလမ်းများအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ဘယ် sprightly ဆွေးနွေးပွဲ 60 နှစ်ပေါင်းပြီးသားမှကော်ဖီအိမ်တော်၌အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်? အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ပင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Long ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးမဟုတ်တော့ကျမ်းစာ၌ရေးထားခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်နှိုက်ကပဏာမခြေလှမ်းအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
စစ်မှန်သောဘဝမှာအခွင့်အလမ်းတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ပညာတတ်တစ်ဦးသူနာပြုနှင့်တွေ့ဆုံပေမယ့်တူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင် salesperson နှင့်သုညနီးပါးအဖြစ်စရိုက်ကိုချစ်ရန်သင်ယူသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုကဖြစ်နိုင်သမျှစေသည်!
အင်တာနက်ကမပါဘဲလက်ျာဖက်ဘို့ဒီတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းရှာဖွေရေးကိုလည်းရိုးရိုးသားသားဆိုရင် single ရှာကြံလူပျို profile များကိုနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်နှင့်စိတ်ပျက်စရာနှင့်အတူယနေ့မောင်းထုတ်ရန်, ကံမကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
တချို့ကယောက်ျားတစ်ဦးမေးလ်ယူမှုကို catalog နှင့်အတူအမည်ရမကြာခဏချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေသာမိန်းမ "အမိန့်" ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ သတိရှိရှိတစ်ညတစ်ခွင်, Sexbeziehung နှင့်ဖောက်ပြန်အပေါ်သူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုရည်မှန်း profiles, ကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ ယနေ့အမှန်တကယ်နီးပါးတိုင်းအင်တာနက်နှင့်ပရိုဖိုင်းကိုလျှောက်လျော့နည်း၏အဆင့်ရှိပြီးကတည်းကတချို့စိတ်မကောင်းတစ်ဆက်တည်းတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးတွေယုံကြည်ပါတယ်။ ပင်န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုများအတွက်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ချိန်းတွေ့, အဆင့်လျော့ကျလာနေပါတယ်နှင့်ဓာတ်ပုံမပါဘဲအမည်ဝှက်မှတ်ပုံတင်ရန်သောသူတို့၏အမျိုးအအရေအတွက်ကိုလွန်ကဲကဲထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။
အကွိမျမြားစှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာ profile များကိုနှင့် Non-လေးနက် profile များကို, အကြောင်းအရာဒီတော့တူသောဖတ်: "ငါဘာမှရှာနေတာပါ။ ကိုယ့် "မယ့်အဖြစ်တန်ပြန်ဖို့ကျွန်မကိုကြည့်ပါ။ အပြင်အဆက်အသွယ်များ၏နံပါတ်နှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်ဤနေရာတွင်ကျသွားအဆင့်နှင့်အများအပြားအတုရှိနေသော်လည်းဖြစ်ကောင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းမှတဆင့်မကြာခဏကဒီမှာတစ်ခုတည်းကြည့်ရှာကြံကံမကောင်းစွာရိုးရိုးသားသား။
အသစ်ရောက်ရှိလာသောမကြာခဏအက္ခရာများနှင့် site ကိုလည်ပတ်မှုနှင့်အတူလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ စုံတွဲများတစ်ခုသာတည်မြဲဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူတထောင်အကွာအဝေးနှုန်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပြီးသားရှိပါတယ်, ဒီဖြစ်ကောင်းစိုးမိုးရေးမှအကျော်ကြားဆုံးချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကခက်ခဲအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်သာအစစ်အမှန်ဘဝအတွက်နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အ 36 ဖို့ 45- ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ခြေ counterparts တွေကိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးယုံကြည်မှုမိသားစုသို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ချီးမြှင့်သို့မဟုတ်မသေးဒုတိယအကျော့အဘို့အဆင်သင့်ရှိပါသည်။
လေးနက်ရှာဖွေရေးဘို့သင့်ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များဖြစ်နှင့်ရှင်းလင်းသောဆန္ဒရှိသော်လည်းသငျ့သညျ။ သို့သော်တဦးတည်းကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းနိဂုံးချုပ်ပြီမဟုတ်သူတွေကိုကရေးသားခံရဖို့မျှော်လင့်ထားရပါမည်။ အလွန်လျင်မြန်စွာသင်မသိစိတ်တစ်ခု "stopgap" အဖြစ်မည်။
ထို့အပွငျ, သင်ပုံတူနှင့်အတူပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ် Adonis စွပ်စွဲသည်သူ၏ဓာတ်ပုံကိုသာနည်းနည်းအကြံအစည်အပေါ်ရှိကြောင်းကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။
အများစုကအထူးသဖြင့်အလေးချိန်နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်လိမ်နေပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယောက်ျားပြဿနာများရှိသည်, သူတို့ရဲ့လြော့နညျးလာဆံပင်ဝန်ခံ။ အမျိုးသမီးများနေ့အတော်လေးသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်ထားကီလိုခိုးလိုလှည့်။ ဒါဟာမကြာခဏပြီးသားအဟောင်းဓါတ်ပုံအစားထိုးခံရဖို့နှစ်ပေါင်း 10 မကြာခဏထို့ကြောင့်အမှုကြောင်းမဟုတ်အဖြစ်မှန်သင့်လျော်သော။
ဘဝအစစ်အမှန်မဟုတ်အင်တာနက်ကိုမတစ်ဦးတောင်းဆိုမှုကိုဖျော်ဖြေပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းကဒီကိုသတိပြုမိသည်နှင့်စကားလက်ဆုံ၏အံ့ဖှယျအနုပညာအားသာချက်ယူလဲလှယ်ခြင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် single အရေအတွက်နှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျှင်အသီးအသီးကိုသိရန်လာပြီဆိုပါက, လမ်းတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှင့် Self-အတွေ့အကြုံကိုဘာမျှအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။